Our News Crewराप्रपामा नयाँ ट्वीस्टः पार्टी अध्यक्षमा धवल शमशेरको दाबी, तीनै अध्यक्ष असफल भइसकेः राणा - Our News Crew
२०७८ जेष्ठ २८, शुक्रबार ०९:४५
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा को अन्तरविरोधमा नयाँ ‘ट्वीस्ट’ देखिएको छ । अन्यपार्टीमा जस्तै अबको नेतृत्व नयापुस्तालाई हस्तान्तरण गरिनुपर्छ भन्ने बहस चलीरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय प्रजातन्त पार्टी राप्रपामा पनी यो बहसले स्थान पाउन थालेको छ । कमल थापा, पशुपति शमशेर राणा र डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी तीनै अध्यक्षबाट पार्टी चल्न नसक्ने भन्दै दोस्रो पुस्ताका नेताहरुले डा. धवल समशेर राणालाई अध्यक्षका रुपमा अगाडि सारीनुपर्ने बहस सुरु भएको हो। राणाले पनि आफू नेतृत्वका लागि तयार भैसकेको बताएका छन् ।
आगामी महाधिवशेनबाट राणालाई अध्यक्ष बनाउने गृहकार्यमा दोस्रो पुस्ताका नेताहरु जुटेका हुन् । हाल नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको मेयरसमेत रहेका धवलशमशेरले पार्टी नेतृत्वको कार्यशैलीबाट आफू सन्तुष्ट हुन नसकेको बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशमा जेठ १७ गते राष्ट्रियसभाको उपचुनाव हुँदा मतदान बहिस्कार गरेका राणाले भने, ‘वागमतीका एमालेका उम्मेदवार बादलजीलाई भोट हालेकोमा पार्टीका कार्यकर्तामा असन्तुष्टि थियो ।’
पूर्वपञ्चको पार्टीमा फेरि पार्टी विभाजनको त्रास
राप्रपामा पुराना पुस्ताका नेताहरुलाई बिदा गरेर समय सुहाउँदो नेतृत्व विकास गरी अघि बढ्नुपर्ने भन्दै विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य राजेन्द्र लिङदेन र डा धवल शमशेर राणासहित नेताहरु लागि परेको बुझिएको छ । यसमा विक्रम पाण्डे, दिलनाथ गिरी, ध्रुवबहादुर प्रधान, दिनेश श्रेष्ठ, राजाराम श्रेष्ठ, राजेन्द्र गुरुङ, सगुन सुन्दर लावती लगायतका नेताहरु सक्रिय बनेर देशव्यापीरुपमा माहोल बनाउन लागिपरेको नेताहरु बताउँछन् ।
राप्रपामा अन्तरविरोधः कमल थापाले भने– दुईवटा ‘अल्छी घोडा’ को चेपुवामा परियो ,राप्रपा नेता दिलनाथ गिरीले युवापुस्तालाई नेतृत्वको अवसर शीर्ष नेताहरुले नै दिनुपर्ने भन्दै अब यसमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए । उनले अबको महाधिवेशनमा युवा पुस्ताको बढीभन्दा बढी प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।
यसै सन्दर्भमा पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको लबिङका साथै नयाँ तथा युवा पुस्ताबाट नेतृत्व लिन तयार रहेको घोषणा गर्ने डा धवलशमशेर राणासँगको संक्षिप्त कुराकानी–
वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बनाउन भनेर तपाईहरुले फेरि पशुपतिशमशेर राणा र डा प्रकाशचन्द्र लोहनीसँग पार्टी एकता गर्नुभयो । त्यसयता पार्टीको आन्तरिक गतिविधिप्रति कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
एकदमै छैन , सन्तुष्टि भएको भए त पार्टी दौडिरहेको हुन्थ्यो । हामी वैकल्पिक शक्तिका रुपमा स्थापित हुन्थ्यौं । तीनवटै अध्यक्षहरु तीनतिर फर्केका छन्, त्यो लुकाउनुपर्ने कुनै कुरा पनि होइन । यस्ता कुराहरु सार्वजनिकरुपमै पनि आउन लागिसकेका छन् । हामीले त उहाँहरु तीनैजनालाई मिलेर पार्टी हाँक्नुस् भनेका हौँ, उहाँहरु अनुभवी, जान्नेसुन्ने र पढेलेखेका मान्छेहरु हो । उहाँहरुको योग्यतामा कुनै शंका नभएकाले आज पनि हामी उहाँहरुकै साथमा छौं । तर, पार्टी अघि बढ्न नसकेको जगजाहेर छ । योभन्दा बढी मैले के भनौँ ।
एउटालाई राम्रो अर्कोलाई किन नराम्रो भन्ने र १ तीनवटै अध्यक्षलाई तपाईंहरु मिलेर जानुस् र पार्टीलाई वैकल्पिक शक्ति बनाउनुस् भन्ने म्यान्डेट दिएको हो । उहाँहरुले सक्नुभएन, त्यो दुर्भाग्य हो । यहाँ कोही अल्छी, कोही बुर्कुसी मार्ने भन्ने कुरै भएन, तीनवटै अध्यक्ष असफल सिद्ध भइसक्नुभएको छ । यसमा कुनै पनि शंका छैन ।
तपाईँले पार्टीको जस्तोसुकै निर्णय मान्छु त भन्नुभयो । तर, लुम्बिनी प्रदेशको राष्ट्रियसभा सदस्य उपनिर्वाचनमा पार्टीको ह्वीपविपरीत तपाईँ किन अनुपस्थित हुनुभएको रु राप्रपाले एमालेलाई मतदान गर्ने भनेको थियो, तपाईले किन नमानेको ?
अन्तिममा, अर्को एउटा राजनीतिक प्रसंग जोडौँ, प्रतिनिधिसभा विघटनलाई कसरी हेर्नुभएको छ रु यो विषयमा राप्रपाको लाइन के हो ?
विघटन संवैधानिकरुपमा ठीकरबेठीक भन्ने कुरा त अब न्यायाधीशले फैसला गर्लान् । तर, नेताहरुको स्वार्थ र पार्टीको विवादले देश नै चल्न नसक्ने स्थिति भइसकेको थियो । यही पृष्ठभूमिमा विघटन भएको छ र चुनाव नै एउटा विकल्प हो ।
हामी त देश यसरी चल्दैन, यो सिस्टमले चल्दैन भन्नेमा प्रष्ट नै छौं । देशमा महामारी छ, नेताहरु भने कुर्सीकै लागि लडिरहेका छन् । तिनीहरु देश र जनताको स्वास्थ्यको कुरा भन्दा पनि आफ्नै स्वार्थ र सत्तासिप्ताका लागि कुर्सीको मोहमै दौडिरहेको हामी सबैले देखिराखेका छौं । यो स्थितिबाट मुक्ति पाउनका लागि उपाय त चुनाव नै हो ।रातोपाटिबाट साभार
१७ वर्षकै उमेरमा तीनवटा स्नातकोत्तर गर्ने अलका आत्रेयको अनुभव